मिठाई, मिठाई, बेकिंग | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: डेसर्ट, मिठाई, बेकिंग
डेनिश व्यञ्जन: डान्स्क क्रेडिका (डेनिश स्पिस केक) - पकाउनुहोस्
प्रकाशित 26.02.2019 26.02.2019
डेनमार्क मा, सबै को पकाउन को लागी एक जुनून छ। पाई र मफिनको प्रेमको बाबजुद, डेनिस बीच त्यहाँ थोरै मोटा मानिसहरू छन्। पहिलो, एक स्वस्थ जीवन शैली उच्च सम्मान मा आयोजित छ। दोस्रो, उत्कृष्ट पारिस्थितिकी। तेस्रो, ...
अजरबैजानमा, शेकरबुरा चियाको साथ मिठो मीठो पेस्ट्री हो। वास्तवमा, यी अर्धचन्द्राकार पाईहरू हुन्। तिनीहरू crumbly वाफल आटा बाट तैयार छन्। भित्रबाट सुख्खा (भिजेको छैन!) राख्नुहोस् ...
केई र मक्खन क्रीम संग केक "क्रिसमस" - अविश्वसनीय नाजुक
नयाँ वर्ष २०१ in मा जीवनलाई मीठो बनाउन, र त्यहाँ कटुताको लागि कुनै ठाउँ छैन, हामी छुट्टीको लागि धेरै स्वादिष्ट मिठाईहरू तयार गर्नेछौं। घरेलु मिठाई, जेलि, कुकीज र, पाठ्यक्रम, नाजुक केक ...
नयाँ वर्षको तालिका २०१ For को लागि: हनी पिग कुकीज - नुस्खा मात्र सुपर छ!
पृथ्वी सुँगुरको वर्ष नजिकै आउँदैछ, छुट्टी तालिकामा सुँगुर आकारको एउटा डिश थप्नुहोस्। यो सलाद वा पाई हुन सक्छ, र हामी तपाईंलाई यस्तो हास्यास्पद कुकी बेक गर्न सल्लाह दिन्छौं ...
मिठाई नयाँ वर्षको तालिकामा 2019: केला-अखरोट आइसक्रीम - एक नुस्खा
स्वादिष्ट घर बनाइएको आइसक्रीम बनाउनुहोस्। यो कोमल, चिल्लो, मखमली हो - यो नयाँ वर्षको भोजको लागि एक ठूलो अन्त हुनेछ। घरेलु आइसक्रीमको जीवन्त स्वाद हुन्छ, किनकि यो प्राकृतिक सामग्रीहरूबाट तयार पारिन्छ। हामी सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छौं ...
नयाँ वर्ष २०१ In मा, तपाइँको टेबुलमा तपाइँको मनपर्ने डेसर्टहरू हुनुपर्दछ: जामुन, फलफूल र कुटेज चीज, दलिया वा जिंजरब्रेड कुकीजको साथ पेस्ट्रीहरू, सुक्खा फल र काष्ठफलबाट बने मिठाईहरू, घरेलु आइसक्रीम। यदि केक छ भने ...
मलाई भ्याउड फलाममा मोटी waffles को लागि केहि साधारण नुस्खा बताउनुहोस्!
मलाई वाफल फलामको मोटा waffles को लागी केहि सरल विधि बताउनुहोस्! वेबसाइट pirogblog मा। com हेर्नुहोस्, त्यहाँ सामान्यतया मानदण्डका लागि व्यञ्जनहरू हुन् आटा १ flour175 g नुन १/२ चम्मच। चिनी २ चम्मच। l ...
एक बिस्कुट रोलमा कसरी रोलियो ताकि यसले तोड्न सक्दैन?
बिस्कुटलाई रोलमा कसरी रोल गर्ने कि यसले ब्रेक हुँदैन? तपाईंले यसलाई तातो राख्नुपर्दछ जब यो न्यानो छ। भिज्नुहोस् र यसलाई भिजेको बनाउँनुहोस् र ठोस सेलोफेनमा, रोल गर्नुहोस् जब बिस्कुट पूर्ण रूपमा नरम हुन्छ, तपाईंले यसलाई पातलो बनाउनु पर्छ ...
चकलेट सस बनाउन कसरी?
कसरी चकलेट सॉस बनाउने? तीतो चकलेट (काटिएको) - २ g० ग्राम अण्डोको पनीर - p पीसी। चिनी - t चम्मच। l ह्विपिंग क्रीम - २ कप भेनिला एक्स्ट्र्याक्ट - १ ...
के लिए उपयोगी उबलिएको अण्डाहरू के छन्?
उमालेको अण्डा किन उपयोगी छ? जर्दीले केही पदार्थ समावेश गर्दछ, म बिर्सिएको छु, मस्तिष्क, लेसिथिन वा अरू कुनै चीजको लागि, र प्रोटीन १००% प्रोटिन हो। अण्डाहरूले स्तन क्यान्सरको विकास रोक्न मद्दत गर्दछ। अण्डाका यी गुणहरू ...
एक नुस्खा चाहिन्छ। charlottes in English with translation
एक पर्चा आवश्यक छ। अंग्रेजीमा चार्लोट्स एक अनुवाद संग, राम्रो, हुनसक्छ उनीहरूले उनीलाई अ Apple्ग्रेजी एप्पल केक oons चम्मच मक्खन, कोठाको तापक्रममा, साथै थालमा १-२ स्याउ ग्रीसिंगका लागि थप प्रश्न गरे।
एक रोटी निर्मातामा कालो रोटी बेकिंगको लागि राम्रो नुस्खा।
एक रोटी निर्माता मा कालो रोटी पकाउन को लागी एक राम्रो नुस्खा। मेरो उत्तर र फोटो एल्बम "मेरो रोटी" रोटी राई कार्यक्रम RYE हेर्नुहोस् (hours घण्टा min० मिनेट।) एक पिठो मिसाई नचेको चक्कु प्रयोग गरिन्छ) खमीर १.3...
सफ मोमेन्ट ड्राई खमीरको साथ कसरी आटा राम्रोसँग तयार गर्ने?
कसरी सफ मोमेन्ट ड्राई खमीरको साथ आटा राम्रोसँग तयार गर्ने? ड्राई खमीरको बारेमा सँधै बिर्सनुहोस् यदि तपाईं वास्तविक पाईहरू लिन चाहनुहुन्छ भने। तपाईंले लाइभ खमीरले प्रदान गर्ने स्वाद कहिल्यै प्राप्त गर्नुहुने छैन।
मलाई बताउनुहोस् कि तपाईं दही देखि केक गर्न सक्नुहुन्छ। दहीबाट के के गर्न सक्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्! धन्यवाद
मलाई भन्नुहोस् तपाई दहीबाट के पकाउन सक्नुहुन्छ। कृपया मलाई भन्नुहोस् तपाई दहीबाट के पकाउन सक्नुहुन्छ! धन्यबाद पाई, भर्खरै पिठो, चिनी, सोडा र कुनै भरिने चीज थप्नुहोस्। स्वादिष्ट हुनेछ। तपाईं घुमाउरो दूधबाट कुटीर चीज बेक गर्न सक्नुहुन्छ ....
कृपया मलाई बोरोडिनो रोटीको बनाउने विधि बताउनुहोस् जुन तपाईं रोटी निर्मातामा पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो राई कस्टर्ड g० ग्राम बेक गरें। ब्रु माल्ट ml० मिलि उमालेको पानी खमीर १g ग्राम। थिचेको गहुँको पीठ २२40 ग्राम राई 80२14 ग्राम। १ घ ...
घरमा के हो तिमी खाना डाई हरियो बनाउन सक्छौ?
तपाईं घरमा हरियो फूड रंग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? रातो बन्दकोबी छर्क्नुहोस्, जुस निचोरेर + खट्टा / सिरका को थोप्लो को एक जोडी, निम्बू / हरियो हुँदैन, तर नीलो को छाया ...
तपाईं कसरी घर मा "नेपोलियन" लाई राम्ररी सजावट गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं कसरी घर मा "नेपोलियन" लाई राम्ररी सजावट गर्न सक्नुहुन्छ? कस्टर्डबाट गुलाब निचोरेर सिरिन्ज, ग्रेटेड चकलेट वा नारियलको साथ छर्कनुहोस्। सामान्यतया, मैले कन्फेक्शनरीमा खाद्य बिक्री हुने सामानहरू देखेको ...
सोमालियाबाट के गर्न सकिन्छ, पुष्प को छोडेर, के व्यंजनहरू त्यहाँ छन्?
सूजीबाट के पनीर बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ के रेसिपीहरू छन्? मन्ना, फोटो मो को लागि यो नुस्खा छ: आटा: २ गिलासो सूजी ०.० l केफिर १, चम्मच। l बेकि powder पाउडर १ गिलास चिनी ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 32 अर्को पाना
81 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,838 प्रश्नहरू।